DEEDKA KA SOOJIRTA GABAYGA AYAA SAMEEYA: ADIGOO RAACAYA TALAABO TALLAABO TALLAABO AH - INFRASTRUCTURE
Dad badan ayaa sii kordhaya si ay u isticmaalaan gaballo, oo aad si fudud u dhisi kartid gacmahaaga, sidaa daraadeed maqaalkani waxaan eegeynaa talaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo sameeyo xayndaabka noocan oo kale ah.
Dad badan ayaa wali wali wax maqlin wax ku saabsan gabayada guud ahaanna ma fahmin waxa ay tahay. Ma sheegi kartid qibradaha khibrad ee qibrada leh, kuwaas oo sii kordhaya isticmaalka qaababahan labadaba si ay u qurxiyaan dayrka, iyo sida walxaha la isku xidho. Laakiin aan ka fekereyno waxa ay gabalahii heleen caan ka dhigtay.
Ma taqaanaa? Gaboobayaasha hadda waxaa loo isticmaalaa sida walxaha qurxinta, laakiin kuwa yaryar ayaa ogaanaya in horraantii dhismayaashu ay ahaayeen qaybo ka mid ah dib-u-celin oo askar ilaalinaysa intii lagu jiray dagaalka.
Caannimadooda waxaa sabab u ah faa'iidooyinka soo socda:
awood sare Qaybaha qaab-dhismeed ee u adkeysan kara culeysyo badan;
qaab dhismeed dabiici ah Iyada oo ay ku xiran tahay dhismaha, waxay u egtahay mid dabiici ah oo ka soo horjeeda asalka jawiga deegaanka iyo muuqaalka;
qiimaha hoose iyo fududaynta dhismaha. Haddii aad isbarbardhigto qaababka xoojinta iyo lebbiska, xayndaabka, oo ka kooban kaliya dhagaxa iyo mesh, wuxuu yarayn karaa kharashka dhismaha xayndaabka ilaa 60%. Gabayo waa wax fudud in la fuliyo, sidaas darteed uma baahnid inaad ku lug yeelatid khabiirada dhismaha xayndaabka - waxaad la qabsan kartaa adiga keligaa, kaas oo sidoo kale hoos u dhigi doona kharashka dhismaha;
adkeysiga qaabdhismeedka. Sababtoo ah xaqiiqda ah in qaab dhismeedka dhismaha laga bilaabo qashinka lagu xardhay, iyo dhagxigu wuxuu u dhaqdhaqaaqaa sida fiilo, qaybahaasi uma baahna daryeel gaar ah waxayna ku hayaan muuqaalkooda iyo xooggooda muddo dheer;
caabbinta cimilada. Deedka noocan oo kale ah kama baqdo isbedelka heerkulka, kuleylka iyo qabowga, roobabka qaabka barafka iyo roobka;
muddada howlgalka oo dhan ah ayaa weli ku jira foomkooda asalka ah - ha buuqin ama ha lumin lumay;
dhismayaasha uma baahna dhismaha aasaaska, iyo si loo xakameeyo gabayada oo kaliya xal loo baahan yahay kuwaas oo taageerooyinka lagu rakibay;
dhismaha waa la dhisi karaa muddo gaaban iyo iyada oo aan loo eegin xilliga xiga;
dhismo suurtagal ah gudaha dhul ay ku leedahay dhul adag, sida qeybo kala duwan oo ku xiran xag kasta;
si loo buuxiyo ugu habboon alaab kala duwantaas oo laga yaabo inay shaqeyn waayeen muddo dheer. Sidoo kale mideeynta xayndaabkani waa in alaabooyin kala duwan ay isku xirnaan karaan - wax kastaa waxay ku kooban tahay oo kaliya xajmigaaga;
Looma baahna in xayndaabka oo dhan laga bilaabo gabaadaha - waa la isku dari karaa, tusaale ahaan, qeyb ka mid ah gabayga ayaa lagu dari karaa qeybo ka mid ah qaybaha alwaax ama shabakad.
Hirgelinta wax soo saarka shirkadaha yar yar ayaa had iyo jeer jecel inay isticmaalaan xadhigga galvanizedtaas oo cufnaanta ay aad uga badan tahay "feeraha" caadiga ah. Cufnaanta siligkan waa qiyaastii 280 g / m2. Xaaladaha qaarkood, silig ayaa laga yaabaa in PVC loo xirxiro halkii la galvanized. Dhumucda xariiqda ayaa ku kala duwan 2 ilaa 6 mm.
Adiga oo gacmahaaga ku leh dalka waxaad dhisi kartaa galka, maqaasiinka, aqalka dhirta lagu koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo, dhagaxyada, aviary, qallalan qallalan, alpine slide.
Gabion wuxuu ka kooban yahay weelal, sidaa darteed waa inay noqdaan kuwo xooggan sida ugu macquulsan si aan u dhicin oo aan waxyeello lahayn marka la eego cadaadiska culus ee fiilaha culus. Si loo ilaaliyo gabayada xaaladaha noocaas ah, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo farsamada laba xabbadood oo silig ah.
Waa muhiim! Unugyada mesh-ka mashiinka waa in lagu sameeyaa qaabab badan oo joogto ah si loo dhiso dhismaha si fiican uuna u qaboobo.
Xulashada dhagxaan ku haboon
Si loo buuxiyo shaxanka, kaas oo markaa loo isticmaali doono dhismaha googooyo, waxaad isticmaali kartaa qalab kasta. Si aad ugu dambeyn go'aansatid doorashada doorashada, waa inaad tixgelisaa:
doorbidida shakhsi ahaaneed;
halkaas oo xarunta loo qorsheeyay in ay ku taal.
Haddii aad go'aansato inaad la xiriirto naqshadeeyayaasha si ay kuu sheegaan waxa loo adeegsanayo buuxinta, ka dibna khubarada badanaaba waxay doortaan dhagaxyo macmal ama dabiici ah. Waxay noqon karaan kuwo aad u kala duwan, laakiin waa in ay ahaato cabbir wayn.
Si aad u buuxiso gabayada, waxaad isticmaali kartaa dhagaxyo sida basalt, granite, diorite, quartzite. Sidoo kale, riwaayadda caadiga ah ee sandstone, taas oo loo tixgelinayo in ay jaban tahay, laakiin aan ahayn tayada yar iyo faylid wax ku ool ah.
Waa muhiim! Markaad dooranayso fiilo, fiiro u yeelo in cabirkiisu ka sarreyso unugyada ku jira bogga saddexaad: xaaladdan ayaa lagama maarmaan u ah si dhagaxyada loogu talagalay gabayada aysan ku soo daadin iyaga.
Qalabka iyo qalabka shaqada
Wixii dhismaha xayndaabka waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso sarbeebyo qaab ah:
naqshaddataas oo loo isticmaali doono in lagu xiro walxaha gabayga, ujeedkani sidoo kale waxaa suurtagal ah in la isticmaalo silig isdilaya;
tuubooyinkaka sameysan bir birta si loo xalliyo alaabta dhulka;
qalabka birta - waxay u baahan yihiin si ay u qabtaan darbiyada darbiyada, kuwaas oo ku yaala dhinac ka soo horjeeda midba midka kale.
Si loo hubiyo in talaabooyinkaagu amaan yihiin, iyo sidoo kale in la yareeyo shaqadaada, waa in aad soo iibsataa qalabka dheeraadka ah:
Ka hor inta aanad bilaabin dhismaha xayawaanka gabaadka, waa inaad marka hore diyaariso meesha uu dhismuhu ku yaal. Waa lagama maarmaan, haddii ay suurtogal tahay, in la daboolo dusha ciidda oo calaamadee fogaanta si loo dhiso taageerooyinka.
Sidoo kale, meeleynta la qorsheeyay ee gabooyinka waa in la nadiifiyaa haramaha, xididdadiisa iyo dhammaan noocyada walxaha ee faragalin doona rakibidda.
Tallaabooyinka soo socdaa waa in lagu hagaajiyaa rakibida tiirarka kaas oo dhismaha oo dhan lagu rakibi doono. Si arrintan loo sameeyo, qodo godadka carrada, oo ku yaal meel fog oo laba mitir u jirta midba midka kale si tiirbaaxa u qodaya godadka saddex meelood hal meel. Marka xigta, taageerada diyaarsan waa in lagu dhejiyo godadka iyo ku shub hoobiyaha sibidhka. Ka dib marka wax lagu qabto, waa inaad sugto 2 cisho oo ah sibidhka si adag, iyo tiirarka si loo hagaajiyo.
Ma taqaanaa? "Gacan weyn" - waa sida ereyga "gabion" looga tarjumay Faransiis. Interesting, laakiin Faransiiska ereygan marar dhif ah ayuu isticmaalaa, marar badanna waxaa laga heli karaa wada hadalka Isbaanishka.
Nidaamka talaabo-tallaabo-tallaabo ah ee lagu rakibayo iyo rakibida deyr
Tixgeli qalabka gawaarida ee loo yaqaan 'elektarooniga' ee loo yaqaan 'design in landscape design' iyo tiknoolijiyadooda dhismaha iyaga oo leh sawir leh:
Ka dib hawlgalka hordhaca ah, waa inaad sii wadaa rakibidda dhismaha shabakadda. Waa lagama maarmaan in la cabbiro oo la gooyo dhammaan qaybaha dhismaha oo ay ku dhejiyaan caawimaadda xajiyaha zinc ee taageerooyinka la diyaariyey. Cufnaanta qaybaha xiriirka ee shabakada waxaa lagu siin doonaa jawaanno xirmo.
Marka meshka birta ku xiran tahay, waa in lagu daaweeyaa wakiil ka hortagaya dhoobada meeshii laga soo gooyay fiilada si looga hortago dhoobada.
Marka fiilada si buuxda loo soo ururiyo laguna shaqeeyo, waa inaad bilowdaa buuxinta waxyaabaha la diyaariyey. Hannaankani waa in lagu sameeyaa gacanta.
Marka dhismuhu ka dhergo dhagaxyo, waa lagama maarmaan in la xiro qaybtiisa kore ee qaybta sare ee mesh oo horay loo jaray.
Sidaa awgeed, xayndaabka xayawaanka waxaa laga dhigi karaa si sahlan oo gacmahaaga ah, waxa ugu muhiimsan waa in la tixgeliyo dhammaan waxyaabaha la isku qurxiyo marka la dooranayo qalabka, iyo sidoo kale in la raaco tilmaamaha rakibaadda naqshad fudud. Haddii wax walba si sax ah loo sameeyo, markaa natiijada waxaad helaysaa hal nadiif ah oo xoogan oo qurux badan oo kuu adeegaya sanado badan.